Openpilot: chirongwa chakavhurika sosi yemota dzinozvimiririra | Linux Vakapindwa muropa
Tiri kusangana nedhijitari shanduko sezvo madhijitari madhijitari achiramba achiwana traction kutenderera pasirese uye mabhenefiti ehupfumi e digitization ari kuwedzera. Shanduko yedhijitari ndeyekushandisa tekinoroji yedhijitari kugadzira hwaro hwekuvandudza mune bhizinesi neindasitiri.
Mune indasitiri yemotokari, mota dzakashongedzerwa nenhamba huru yema sensors, makamera, chaiyo GPS nemakomputa. Iko kusanganiswa kweboardboard michina inobvumidza zvirongwa kuona dzimwe mota, migwagwa, vanofamba netsoka, uye zvipingaidzo.
Ruzivo urwu rwunobvumira mota kuti irambe iri munzira yako, kumira kana zvichidikanwa, uye kutaurirana zvipingamupinyi.
zvose zvionera mota zvinoshandisa makomputa uye zvakapihwa data. Idzi mota dzinokwanisa kuzvifunga dzoga.
Vakapihwa ruzivo rwakakwana, ivo vanogona "kudzidza" uye kugadzirisa yavo pachavo kodhi zvichibva pane izvi zvitsva parameter. Isu tinoziva kuti software inogona kunyorwa kuitira kuti data igone kushandura marongero ekodhi kuti igadzirise kumhanya uko kwako kuyaruka kunogona kutyaira mota yavo.
Iyo sensor inofanirwa kuve yakabatana kunetiweki kuitira kuti iyo data yakaunganidzwa ichengetwe uye govana.
Vanodzora vane basa rekutora sensor data uye nekupa network kubatana kana Indaneti. Vanogona kuita sarudzo nekukasira kana ivo vanogona kutumira iyo data kune yakasimba simba komputa kuti iongororwe.
Iyi komputa inogona kunge iri pane imwecheteyo nharaunda netiweki semutongi, kana inogona kungowanikwa chete kuburikidza neInternet kubatana.
Pakati pevakakurumbira vanogadzira mota maTesla Motors, General Motors, Volvo neMercedes-Benz.
Makambani akaita saWaymo, Uber uye diki Comma.ai ne software yavo yeOpenPilot ivo vanogadzira zvakare uye kuyedza iyi tekinoroji.
Comma.ai parizvino ikambani ine vanhu gumi nevaviri. Yakagadzwa muna2015 naGeorge Hotz uye ine nharaunda inoshingairira inobatsira kune openpilot repository paGitHub. Chinangwa chayo ndechekuita kuti kutyaira kuve kwakanakisa uye kwakachengeteka.
1 Nezve Openpilot
2 EON Devkit: co-mutyairi
3 Panda: chishandiso chekutaurirana nemota yako
mutyairi akavhurika yakavhurika sosi yakamira yakazvimiririra yekutyaira mumiriri iyo inoita Adaptive Cruise Control (ACC) uye Lane Kuchengeta Inobatsira (LKAS).
Inotsiva OEM Driver Rubatsiro Masystem (Original Equipment Mugadziri) kugadzirisa maonero ekuona uye kutonga.
Inobvumira vashandisi kugadzirisa avo aripo mota neakakwira komputa simba, Yakagadziriswa maseru uye anogara achigadziridzwa mutyairi rubatsiro maficha anowedzera mushandisi kuisa.
Rekodhi nzira yekamera, tsaona, uye anoshanda masystem. Openpilot inoshandisawo mota yemabhazi eCAN kuverenga powertrain uye data rebhazi redhara, kuita sarudzo, uye kunyora mameseji kubhazi. Aya mameseji anodudzirwa kuti akurumidze kana kudzikisira mota uye kutenderedza sitering.
Openpilot inogoverwa pasi peMIT rezinesi. Zvimwe zvikamu zve software zvinogoverwa pasi pemamwe marezinesi akataurwa. Inouya nematombo ekutsigira.
EON Devkit: co-mutyairi
Yakavakwa pahwaro hweiyo NEOS inoshanda sisitimu, inosanganisira:
64GB yekuchengetera mukati
Mahara gore rekuchengetedza
mutyairi pamberi pekamera anogona kunyora mukati memota yako
dhata dhata kuti uwane rumwe ruzivo nezve yako mota
Inesarudzo Wi-Fi uye nhare dzekubatana.
kutarisa kutarisisa kwemutyairi kunatsiridza kudzidziswa kwavo
Otomatiki tanga kurekodha kana chiitiko chekufungidzira (kufungidzira, kurovera, nezvimwewo) kuchionekwa.
Panda: chishandiso chekutaurirana nemota yako
Panda inopa kuzara kuzere kune akawanda mota kutaurirana mabhazi kubva kune komputa kana foni. Iyo inoshandawo seCAN kune USB adapta. Inosanganisira:
Matatu ANOGONA madoko, 2x LIN, 1x GMLAN, USB A, Wi-Fi (chete mune nhema panda).
Yakanyanya kujeka GPS (chete paGrey Panda)
Panda yakagadzirirwa mota kubva muna2008 uye nyowani. Panda firmware inosunungurwa pasi peMIT rezinesi.
Dzinodzivirira mota dzinotarisirwa kugadzirisa iyo auto indasitiri munguva pfupi iri kutevera. sezvo mazita ese makuru muindasitiri ari kutsvaga musoro wenyaya.
Openpilot kodhi yekodhi inowanikwa pa GitHub
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Openpilot: yakavhurwa sosi chirongwa chemota dzakazvimiririra
European Central Bank inozvidza cryptocurrencies.